Toddobo kooxood oo ku dagaalamaya saxiixa xiddig ka tirsan Real Madrid – Gool FM
Dajiye April 8, 2020
(Yurub) 08 Abril 2020. Wargeysyada Spain ayaa waxay shaaca ka qaadeen inay jiraan Toddobo kooxood ee ku dagaalamaya, saxiixa xiddiga reer Morocco iyo kooxda Real Madrid ee Achraf Hakimi.
Achraf Hakimi ayaa haatan heshiis amaah ah ku joogo kooxda Borussia Dortmund, wuxuuna haatan noqday mid ka mid ah xiddigaha ugu fiican adduunka ee booskiisa.
Haddaba Sida laga soo xigtay wargeyska “Mundo Deportivo” ee dalka Spain kooxda Real Madrid ayaa waxay dooneysaa inay sii heysato adeega Achraf Hakimi.
Tababbaraha reer France iyo kooxda kubadda cagta Real Madrid ee Zinedine Zidane, ayaa lagu soo waramayaa inuu doonayo inuu wadahadalo la yeesho xiddiga reer Morocco ee Achraf Hakimi, dhamaadka xilli ciyaareedka si uu u sii joogo Los Blancos.
Laakiin Achraf Hakimi ayey wararku sheegayaan inuusan dooneynin inuu noqdo bedelka Dani Carvajal ee daafaca garabka midig, wuxuuna doorbidayaa inuusan ugu laaban garoonka Santiago Bernabéu arrintan.
Si walba ha noqotee, wargeyska “Mundo Deportivo” ee dalka Spain ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in dhamaan kooxaha kala ah Arsenal, Chelsea, Tottenham Hotspur, Juventus, Paris Saint-Germain iyo Bayern Munich ay ku tartamayaan saxiixa Achraf Hakimi.
Waxaa xusid mudan in 21 jirkan reer Morocco uu ka qeybgalay 46 kulan oo kooxda Borussia Dortmund ah, dhamaan tartamada kala duwan mudo labo xilli ciyaareed ah.